I-STAR WARS ISIQENDU SE-9 SESIKRIPTHI ESIVUZAYO SIYINYANI KODWA SIYILUNGISA INQAKU ELINYE LEPLOTHI YADITYANISWA NGUCOLIN TREVORROW - IIMUVI
Okwangoku, uJ. UAbrams ngumlawuli kunye nombhali-mbhali we Star Wars: Ukunyuka kweSkywalker, kodwa siyazi ukuba yena
Okwangoku, uJ. UAbrams ngumlawuli kunye nombhali-mbhali Iimfazwe zeNkwenkwezi: Ukunyuka kweSkywalker , Kodwa siyazi ukuba wayengasoloko engumlawuli okanye umbhali wokuqala wefilimu.
Olo luzuko laya kuColin Trevorrow, owayengumbhali wokuqala kwasekuqaleni ngo-2015.
Waqala iskripthi se-Star Wars 9 kunye nomlingane wakhe ophindaphindayo uDerek Connolly kule minyaka imbalwa ilandelayo.
Kodwa ngo-2017, uTrevorrow wayishiya le projekthi ngenxa yantlukwano yoyilo. Kulapho u-Abrams wafola khona kwaye waqala ukubhala ibali kwakhona. UAbrams noChris Terrio bafumana umdlalo weqonga ngekhredithi, kwaye uTrevorrow noConnolly balifumana ibali ngekhredithi.
Njengoko iTrevorrow yayikwi-Star Wars 9 ixesha elide, sasisazi ukuba uphuhlise ubuncinci besiyilo esinye somdlalo weqonga. Oku kuthetha ukuba kwenye indawo ngaphandle kwenguqulelo yesiqendu IX. Kwaye ngoku, ukubetha okubalaseleyo kwesinye seedrafti zikaTrevorrow kuvuza kwi-Intanethi.
Ngaba i-Star Wars Episode 9 script yavuza njani?
Isikripthi esivuzayo ithulula kwi-YouTuber uRobert Meyer Burnett. Uthumele ividiyo izolo etyholwa ngokuqhekeza eyona ndlela iphambili yamabali enguqulelo kaTrevorrow ye-Star Wars 9. Ibizwa ngokuba yi-Star Wars: iDuel of the Fates.
Ngaba i-Star Wars 9 kaColin Trevorrow yahlukile kuJJ. Inguqulelo ka-Abrams yefilimu?
Izikripthi Zahluke ngokupheleleyo omnye komnye.
Ngaphambi kokuba sicinge ngakumbi ngamanqaku esakhiwo, kubalulekile ukugcina umkhondo kwizinto ezimbini.
1. Iskripthi sibonakala ngathi sinomhla kaDisemba 2016, ke akukho kungathandabuzeki ukuba bekuya kubakho utshintsho olutsha.
2. Njengoko sibonile kaninzi, utshintsho olubalulekileyo lunokwenzeka kwiskripthi xa iikhamera ziqengqeleka. Ke akukho siqinisekiso sokuba ukuba uTrevorrow ebehleli kwi-Star Wars 9, yile nto ibali lebhanyabhanya beliya kuba yiyo. Kodwa oku kusinika umbono wokuba uTrevorrow wayesebenzela ntoni kweli bali.
U-Trevorrow Uphendule Njani Kwi-Star Wars evuzayo kwisiqendu se-9?
Umlandeli ku-Twitter ubuze ukuba ubugcisa be-Star Wars, kubandakanya i-Rey's blade-bladed lightaber, kunye ne-R2-D2 efayo, yayiyinyani.
UTrevorrow uthe, Ewe, le isuka kwiDuel of the Fates, kodwa wachaza ukuba i-R2 ayifanga apha, nangona ubugcisa beengcinga bubonakala buchanekile: andinakuze ndibulale i-R2… uthathe nje kakubi. Kwenzeka kuthi sonke.
Ke, ekugqibeleni ikhonkrithi. Isihloko sebhanyabhanya yiDuel yeSiphelo. Umyalezo kaPalpatine, iTor Valum, iarc emnyama yaseKylo, ​​iyinyani.
Ngelixa oko kungazukunciphisa abo bathanda umbono kaTrevorrow kwiiMfazwe zeNkanyezi: Ukunyuka kweSkywalker, abalandeli banokufumana induduzo kwimbono yobugcisa athe wayikhankanya umlawuli nayo ngoku iyafikeleleka ukujonga.
Igalari epheleleyo inokubonwa kwi-Imgur- kwaye iqulethe inkangeleko ebonakalayo kwezinye zeempawu ezichazwe kwindawo yesibini yokuvuza kwelifa.
Ukuxabana kukaRey kunye noKylo Ren kulapho, njengoko uKylo's lightaber elwa nohlobo lwesiporho sikaDarth Vader. Ngeliphi na ibingomnye umzuzu omnandi wokukholisa izihlwele, i-Force Ghost kaLuka Skywalker ide ibambe i-lightaber yaseKylo phakathi-ujingi.
Ukuqukumbela, masilinde ukubona ukuba sifumana ntoni kwi-movie elandelayo ye-Star War. Ndiyathemba ukuba iya kuba yi-blockbuster, i-chartbuster, nayo yonke into eyaphula iirekhodi.
thor ragnarok hbo umhla wokukhutshwa
Eyona midlalo yevidiyo ilungileyo yeXbox 360
kutheni ingekho i-riverdale yexesha le-2 kwi-netflix yam
Ukuza eMelika 3
Ngaba kuya kubakho isizini 7 yendlu yamakhadi
i-cast of hobbs kunye ne-shaw 2